Salaamanews » Maalinta HIV/Aids oo la xusay
Home » Caafimaadka, Dhaqanka, Warar Maalinta HIV/Aids oo la xusay Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 1st, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Maalinta caafimaadka aduunka oo laga xusay dunida oo dhanDhaqtar Soomaali ah oo Muqdisho jooga ayaa in uu helay dawada cudurka HIV/AIDS Sanad guuradii 69-aad ee ka soo wareegtay aas-aaska ciidamada baliiska oo laga xusay SoomaaliyaMuqdisho ma mudantahay marti galinta doorashada?Ra’isal wasaaraha dalka oo lagu dhawaaqay (Taariikhdiisa)
Maanta oo kale waxaa aduunka oo dhan la weyneynayaa qatarta uu leeyahay cudurkan iyo qataraha uu badi karo bani’aadmka, waxaana la kordhiyaa wacyagalinta cudurka iyadoo la taageerayo dadka cudurka la nool oo xaaladda adag ku jira.
Wacyigalinta loo sameynayo dadka aan fakar badan ka heysan qatarta cudurka ayaa waxaa lagu sii baahiyaa bulshada aduunka oo dhan.
.05-tii June sanadkii 1981-kii ayaa la ogaaday in cudurka Aids-ka uu ka dillaacay dunida iyadoo markaasiana ay warbixin daabacday xarunta control-ka cudurrada ee Mareykanka.
Dhaqaatiir badan oo ku kulantay magaalada Los Angeles ayaa ogaatay maalmo uun kadib in cudurka uu yahay Aids, waxaana ay waqtigaasi billaabeen raadinta dawadiisa laakiin illaa iyo maantadan lama hayo.
Sanadkaasi waxaa la helay in cudurku uu sii kordhayo faafkiisa, waxaana dabayaaqadiii sanadkaasi 1981-kii dhintay 121 ruux halka 270-kalena laga helay Feyruska dhliya cudurka ee HIV.
Labo sano uun kadib waxaa hey’adda caafimaadka aduunka ee World Health Organization (WHO) ay sheegtay in cudurka HIV/Aids uu yahay mid saameynaya aduunka oo dhan, waxaana ay waqtigaasi billowday digniino dadka loo jeedinayo.
Hadaba bulshada caalamka ayaa maanta weyneynesa maalintan, waxaana looga dabaal dagay oo maalintan laga xusay Somaliland, iyadoo munaasibad ka dhacday Hargeysa ay ka qeyb galeen madax iyo dad qaba cudurkan HIV/Aids.
Tags: caafimaadka, faallo, warar « Qoraalkii HoreCulimada AHSWJ oo si rasmi ah ugu biiray dowladda Soomaaliya	Qoraalka Xiga »Somali pirates free S. Korea sailors ‘for ransom’	Halkan Hoose ku Jawaab